LaeLar | Myanmar Online Education, eLearning Portal, Courses
"လေ့လာ၏ အထွေထွေ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ"
၁. လိုက်နာရန် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
အောက်ပါဖော်ပြချက်များသည် လေ့လာ ကို အသုံးပြုမည် ဆိုပါက လိုက်နာရမည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် “laelar.com” ကို (လေ့လာ သို့မဟုတ် ကျွနု်ပ်တို့ဟု ) ရည်ရွယ် သုံးနှုန်းသွားမည်ဖြစ်သည်။
(က) အသုံးပြုသူဆိုသည်မှာ လေ့လာ Platform ပေါ်ရှိ ဆရာ/ဆရာများနှင့် ကျောင်းသားများကို ရည်ညွှန်းပါသည်။
(ခ) ဆရာများဆိုသည်မှာ လေ့လာတွင် အွန်လိုင်းသင်ကြားမှု ပြုလုပ်နေသော ဆရာ/ဆရာမများကို ရည်ညွှန်းပါသည်။
(ဂ) ကျောင်းသားများဆိုသည်မှာ လေ့လာတွင် အွန်လိုင်းသင်တန်းများ သင်ယူလေ့လာနေသော ကျောင်းသားများကို ရည်ညွှန်းပါသည်။
ဤ website/app ကို သင်အသုံးပြုမည်ဆိုပါက အောက်ပါ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို သေချာစွာ ဖတ်ရှု၍ နားလည်လက်ခံရန် လိုအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ အောက်ပါ အချက်အလက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း များကို သဘောမတူပါက ဤ website/app ကို အသုံးမပြုရန် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။
၂. အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ
၂.၁ လေ့လာ ၏ Web Services များအား အသုံးပြုရန် လျှောက်ထားသောအခါ အသုံးပြုသူ သည် တိကျသော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များအားထည့်သွင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။ ထို့ပြင် အချက်အလက်ဆိုင်ရာ အပြောင်းအလဲများ ရှိလာလျှင်လည်း ချက်ချင်း အသစ်ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်လိုအပ်သည်။
၂.၂ ထို့ပြင် လေ့လာမှတောင်းဆိုမှုများရှိလာပါက ထည့်သွင်းထားသော ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ၏ တိကျမှန်ကန်မှုအား အတည်ပြုရန် အထောက်အထားများ စီစဉ်ပေးရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။
၂.၃ အသုံးပြုသူသည် မိမိ၏ User Account နှင့် Password အား အခြားသူများသို့ လွှဲပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ် ငှားရမ်းခြင်းများ မပြုရပါ။ အသုံးပြုသူသည် မိမိ၏ User Account အား အခြားသူများမှ တရားမဝင် အသုံးပြုနေသည်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိလျှင် လေ့လာ ထံသို့ ချက်ချင်း အသိပေးရမည်ဖြစ်သည်။
၂.၄ အကယ်၍ အသုံးပြုသူ၏ ပေါ့ဆမှုကြောင့် User Account နှင့် Password အား အခြားသူများ၏ တရားမဝင်အသုံးပြုမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာပါက(သို့မဟုတ်) တိုက်ခိုက်ခံရပါက လေ့လာနည်းပညာကုမ္ပဏီ အနေနှင့် မည်သည့်ပုံစံမျိုးနှင့်မှ တာဝန်ယူခြင်း၊ တာဝန်ခံခြင်းများ ပြုမည် မဟုတ်ပါ။
၃. အသုံးပြုသူများ ရှောင်ကြဉ်ရမည့် အချက်များ
၃.၁ အသုံးပြုသူ သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရှိသည့် ဆက်သွယ်ရေး ဥပဒေ အပြင် အခြားသက်ဆိုင်သော ဥပဒေများနှင့် စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်များအားလုံးအား လိုက်နာရမည်ဖြစ်ပါသည်။
၃.၂ အသုံးပြုသူသည် Web ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် စပ်ဆိုင်သည့် အားလုံးသော သဘောတူညီချက်များ၊ ထုတ်ပြန်ချက်များ နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များအား လိုက်နာရမည် ဖြစ်ပါသည်။
၃.၃ အသုံးပြုသူသည် မည်သည့် မှတ်ပုံတင်မူပိုင်များ၊ မူပိုင်ခွင့်များ၊ နာမည်ဂုဏ်သတင်းဆိုင်ရာ ရပိုင်ခွင့် (သို့မဟုတ်) အခြားမည်သို့သော တရားဝင် ရပိုင်ခွင့်များ နှင့် တတိယ အဖွဲ့အစည်း၏ အကျိုးစီးပွားများ အပေါ်တွင် စည်းမျဉ်းချိုးဖောက်ခြင်းများ မပြုရပါ။
၄. ပြင်ဆင်မှု နှင့် ထပ်မံ ထည့်သွင်းချက်များ
လေ့လာသည် တစ်ဦးတည်းဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်အရ အောက်ပါ အရာများကို အချိန်နှင့်အမျှ ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
၄.၁ ဤ သဘောတူညီမှုကို ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်နိုင်ခြင်း နှင့်
၄.၂ ဤ သဘောတူညီမှု တွင် လိုအပ်သော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ထပ်မံ ထည့်သွင်းခြင်း စသည်တို့ဖြစ်သည်။ အထက်ပါ ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ထားသော၊ ထပ်မံထည့်သွင်းထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို စတင်အသက်ဝင်သော နေ့မှစ၍ website ပေါ်တွင် ထုတ်ပြန်သွားမည်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သဘောတူညီချက်ကို ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ထားသော အချက်အလက်များရှိပါက ကျွနု်ပ်တို့မှ အကြောင်းကြားသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါပြင်ဆင်မှုများ အပြီး Website ကို ဆက်လက်အသုံးပြုနေပါက သင်သည် ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ထားသော အချက်အလက်များကို နားလည်လက်ခံ သဘောပေါက်ပြီး ဖြစ်သည်ဟု ကျွနု်ပ်တို့မှ ယူဆပါသည်။
၅. လေ့လာ၏ အခွင့်အရေးများ
၅.၁ ကျွနု်ပ်တို့လေ့လာဘက်မှ လေ့လာ Website နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများအား ဆောင်ရွက်ရာတွင် မည်သည့်အချိန်၌မဆိုဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
၅.၂ လေ့လာဘက်မှ သင်၏ Account / ငွေပေးချေမှု စသည်တို့ကို မည်သည့်အချိန်၊ မည်သည့်အကြောင်းပြချက် နှင့်မဆို ဖျက်သိမ်းခွင့်ရှိသည်။
၅.၃ မည်သည့်အချိန် ၌မဆို ကျွနု်ပ်တို့၏ စံသတ်မှတ်ချက်များကို ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
၅.၄ အကယ်၍ ဆရာများ၏ Account တွင် ကျွနု်ပ်တို့၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား ချိုးဖောက်သည်ကို တွေ့ရှိပါက ယင်းဆရာများကို လေ့လာဘက်မှ ထုတ်ပယ်နိုင်သည်။
၅.၅ လေ့လာဘက်မှ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတစ်ချို့နှင့် မကိုက်ညီသော အွန်လိုင်းသင်တန်းများ၊ Comment များကို အချိန်မရွေး ပယ်ဖျက်ရပ်ဆိုင်းနိုင်သည်။
၆. လေ့လာရှိ ကျောင်းသားများ၏ ခံဝန်ကတိပြုခြင်း
လေ့လာရှိအွန်လိုင်းသင်တန်းကို စာရင်းပေးသွင်းခြင်းဖြင့် ကျောင်းသားများသည် အောက်ပါအချက်များကို လိုက်နာပါမည်ဟု ယူဆပါသည်။
၆.၁ သင်ခန်းစာနှင့် သက်ဆိုင်သော Assignments များ၊ Project များကို မိမိဘာသာ လုပ်ဆောင်ပါမည်။
၆.၂ User Account တစ်ခုတည်းသာ အသုံးပြုပြီး အခြားသူများနှင့် မိမိ၏ Username နှင့် Password များကို မျှဝေသုံးဆွဲခြင်း မပြုပါ။
၆.၃ စာမေးပွဲ ရလဒ်များ၊ assignment များနဲ့ ပတ်သတ်၍ မသမာသည့်နည်းလမ်းများဖြင့် မိမိအမှတ်များအောင်၊ အခြားသူများ အမှတ်နည်းအောင် မပြုလုပ်ပါ။
၆.၄ သင်ခန်းစာ အဖြေများကို လူမှုကွန်ယက်ပေါ်သို့ဖြန့်ဝေခြင်းမပြုပါ။
၇. ကျောင်းသားများအတွက် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ
လေ့လာရှိ အွန်လိုင်းသင်တန်း တစ်ခုခုတွင် တက်ရောက်ရန် စာရင်းပေးသွင်းပြီးပါက အောက်ပါအချက်များကို ကျောင်းသားများမှ လက်ခံမည်ဟု မှတ်ယူပါမည်။
၇.၁ ကျောင်းသားသည် လေ့လာ၏ အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ၊ ခံဝန်ကတိပြုခြင်းနှင့်၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ကို လက်ခံသည်ဟု ယူဆပါသည်။
၇.၂ ခံဝန္ကတိကို ေဖာက္ဖ်က္ပါက Assignment အတြက္အမွတ္မရျခင္း၊ သင္တန္းမွ ထုတ္ပယ္ျခင္း ၊ ေလ့လာ Website ကို ေနာက္တစ္ၾကိမ္ အသံုးျပဳခြင့္မရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ သင္တန္းဆရာမ်ား ၊ အျခားေသာ course provider မ်ားမွလည္း အေရးယူေအာင္ရြက္ျခင္း စသည္တို ့ကို လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။
၇.၃ ဆရာများမှ သတ်မှတ်ထားသော စည်းကမ်းချက်များကိုု လည်းလိုက်နာပြီး အခြားကျောင်းသားများအပေါ် နှောင့်ယှက်မှုမရှိဟု ယူဆပါသည်။
၇.၄ သင်တန်း၏ အချက်အလက် ကုန်ကြမ်းများ၊ နည်းလမ်းများကိုကူးယူပြီး သင့်ကိုယ်ပိုင် (သို့မဟုတ်) အခြားသူတစ်ဦးဦး၏ အတန်းတွင် ပြန်လည်ဖြန့်ဝေခြင်းမပြုရပါ။
၇.၅ အကယ်၍ သတ်မှတ်ထားသော စည်းကမ်းတစ်ခုခုကို ချိုးဖောက်ပါက လေ့လာဘက်မှ သင်၏ အကောင့်ကို အချိန်မရွေး ပယ်ဖျက်ရပ်ဆိုင်းနိုင်ပါသည်။
၈.၁ သင်တန်းသားများမှ သင်တန်းကြေးများကို ဘဏ်အကောင့်များမှတစ်ဆင့် ငွေပေးချေနိုင်သည်။
၉. ဆရာများအား ငွေပေးချေမှု
၉.၁ လေ့လာဘက်မှ အသစ်ဝင်သည့် ကျောင်းသားဦးရေ စာရင်းကို ပေးပို့ပြီး ဆရာ့၏ ဘဏ်အကောင့်ထဲသို့လစဉ် ၂၅ ရက်နေ့တိုင်းတွင် စာရင်းရှင်းတမ်းဖြင့် ငွေပေးချေသွားပါမည်။
၉.၂ ဆရာတစ်ဦးချင်းစီနှင့် လေ့လာတို့နှစ်ဦးသဘောတူချုပ်ဆိုထားသော စာချုပ်ပါ သဘောတူညီချက်များနှင့် မကိုက်ညီသော အပြုအမူများကို ပြုလုပ်ပါက လေ့လာဘက်မှ ဆရာများအား ငွေပေးချေမှုနှင့်ပတ်သတ်၍ တရားဝင်ပယ်ဖျက်ခြင်း ထိန်ချန်ခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
၁၀. သင်တန်းကြေး ပြန်အမ်းခြင်း
၁၀.၁ လေ့လာဘက်မှ အွန်လိုင်းသင်တန်းကြေးများကို အတန်းအပ်ပြီး ၃ရက်ထက်ကျော်ပါက ငွေပြန်မအမ်းပါ။ ၃ရက်အတွင်း ခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်ရှိပါက သင်တန်းကြေး၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းကို လေ့လာမှ ငွေပြန်အမ်းပါမည်။
၁၁.၁ လေ့လာဘက်မှ သင်တန်းကြေးများ၊ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ပတ်သတ်သော ဈေးနှုန်းများ၊ အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုတို့ကို အချိန်မရွေး ပြောင်းလဲသတ်မှတ်နိုင်သည်။ သို့ဖြစ်၍ သင်တန်းကြေးများမှာ ကျောင်းသားတစ်ဦးချင်းစီအတွက် ဝယ်ယူသည့် အချိန်ကာလပေါ်မူတည်၍ အပြောင်းအလဲရှိနိုင်သည်။
၁၁.၂ သင်တန်းကြေး အပြောင်းအလဲများနှင့် ပတ်သတ်၍ အသိပေးအကြောင်းကြားမှုများအား ကျောင်းသားများထံသို့အခြားသင့်တော်သော နည်းလမ်းများဖြင့်လည်း ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်သည်။
၁၂.၁ ဆရာများဘက်မှ သူတို့၏ ဝင်ငွေပေါ်မူတည် ၍ အခွန်ဆောင်ရမည်ကို နားလည်သဘောပေါက်သည်ဟု ယူဆပါသည်။
အထက်တွင် ဖော်ပြထားသော စည်းမျဉ်းများ နှင့်ပတ်သက်၍ ထပ်မံသိရှိလိုပါက info@laelar.com သို့ အီးမေးလ် ပေးပို့ မေးမြန်းနိုင်သည်။ Back to top
© 2017 LAE LAR TECHNOLOGY CO., LTD.